I-Osage Ababulali: Imbali
Uphando lwe-Osage olubulalayo lwamaNdiya ekubulaweni okwenzeka ekuqaleni kwekhulu lama-20 lunye luphando olunzima kakhulu nolunzima oluye lwaqhutywa yi-FBI. Ngaphambi kokuqaliswa kophando lwe-FBI, malunga nama-asiya amabini ama-Indian ase-Osage afa phantsi kweemeko ezixhasayo. Isizwe sonke sase-Osage saseNdiya, kunye nabanye abemi abangewona amaNdiya base-Osage County, eKorea, babesaba kakhulu kwaye besaba ubomi babo.
Ngomhla ka-Meyi 1921, umzimba owonakele u-Anna Brown, i-Osage yaseMelika yaseMelika, ufunyenwe kwintlambo engasemntla e-Oklahoma. Ummangalelwa kamva wafumanisa umbhobho webhola emveni kwentloko yakhe. U-Anna wayengenalo iintshaba ezaziwayo, kwaye ityala lingahambanga.
Kungenzeka ukuba bekuphelile, kodwa emva nje kweenyanga ezimbini, unina ka-Anna uLizzie Q wabulawa ngokukrakra. Kwiminyaka emibini kamva, umzala wakhe uHenry Roan wadutshulwa wabulawa. Emva koko, ngo-Matshi 1923, udadewabo ka-Anna nomkhwenyana wakhe, uWilliam noRita Smith, babulawa xa ikhaya labo liqhutywe ibhomu.
Omnye ngabanye, ubuncinane abantu ababini kule ndawo abazange baphendule ngokungaqondakali bafile. Akunjalo nje ngamaNdiya ase-Osage, kodwa owaziwa ngamafutha kunye nabanye.
Ziziphi Izinto Bonke Babenabo Ngokufanayo?
Yiyo loo nto abantu abayingozi abafuna ukuyifumana. Kodwa ukubulawa kwabaphenyi abazimeleyo kunye nabanye abaphandi abazange baphendule nto (kwaye abanye bazama ukugxeka ngamabomu imizamo yokunyaniseka).
I-Osage Tribal Council yabuyela kurhulumente wesigqeba, kunye nee-Agent agents zineenkcukacha ngokubhekiselele kwimeko.
Amanqaku athetha kuKumkani wase-Osage Hills
Ekuqaleni, yonke iminwe yabhekisela kuWilliam Hale, othiwa "uKumkani we-Osage Hills." Umntu weenkomo zendawo, uHale wayenxungule, esongelwa, exoxwe, kwaye eyebiwe indlela yakhe yokufumana ubutyebi namandla.
Wakhula waze wabiza i-greedier ngasekupheleni kweminyaka ye-1800 xa i-oyile yafunyanwa kwi-Osage Indian Reservation. Ngokukhawuleza, i-Osage yaba yintsikelelo ebuncwane, ifumana iimali zokuthengiswa kweoli ngokwegunya labo "lamalungelo entloko".
I-Case Clear of Greed
Ukuxhamla kukaHale kwintsapho kaAna Brown kwacaca. Umntakwabo owayenamandla, u-Ernest Burkhart, watshata noodadewabo ka-Anna, uMollie. Ukuba u-Anna, unina, kunye noodadewabo babulawa onke "amalungelo entloko" aya kudlulela kumntakwabo kunye neHale angathatha ulawulo. Umvuzo? Isiqingatha sezigidigidi zeedola ngonyaka okanye ngaphezulu.
Ukhokelo lobuxoki Uphando lwe-Hamper
Ukuxazulula le nto yinto enye. Abahlali bebengathethi. UHale wayesongela okanye ahlawulela abaninzi babo kwaye abanye bebenokungathembeki kwabangaphandle. I-Hale nayo yatyala inkohliso eyathumela i-FBI agents ejikeleza ngasentshonalanga.
Ngoko ezine i-ejenti zafumana ubuchule. Bahamba bambuza njengomthengisi we-inshurensi, umthengi wenkomo, umhloli weoli, kunye nogqirha wezityalo ukuze avelise ubungqina. Emva kwexesha, bafumana ithemba le-Osage waza wakha ityala.
I-FBI yenza Intuthuko
Abaphandi babonakalisa ukuba ngobusuku bokubulala kwakhe, u-Anna wayedywe nguKelsey Morrison, umfazi kaMorrison noBryan Burkhart.
Bahamba ngedorobho indlu kaWilliam K. Hale owamnika uMorrison i-pistol .32 ukuze abulale uAna. Ukusuka endlwini kaHale, iqela liqhubela ngaphaya kweenyawo ezingamakhulu ambalwa apho umzimba ka-Anna wafunyanwa kamva, kwaye ngoxa uBryan Burkhart wayephethe u-Anna onxilisekile, uMorrison wamdubula emva kwentloko. UMorrison kamva wavuma ukuba uHale wamxelela ukuba abulale uAna waza wafakazela ngolu hlobo ngexesha lovavanyo lukaHale.
I-FBI yafunda nokuba uHale wayeqeshwe uJohn Ramsey, oneminyaka engama-50 ubudala, ukuba abulale uHenry Roan. UHale wathenga uRamsey imoto ye-Ford eyi-500 ngaphambi kokubulawa koMoya njengenxalenye yentlawulo yesenzo kwaye wamhlawula i-$ 1000 kwimeko emva kokubulawa.
URamsey ube ngumhlobo kunye noRoan kunye namabini aphuza i-whisky kunye ngezihlandlo eziliqela. NgoJanuwari 26, 1923 uRamsey wancenga uRoy ukuba aqhube kwi-canyon.
Lapha wadubula uRoan emhlane emva kwentloko. UHale kamva wachaza ukuba uRamsey akazange akwenze ukufa kukaRoan kubonakale nje ukuzibulala. URamsey kamva wavuma ukubulawa.
UHale uqeshe uJohn Ramsey noAsa Kirby ukuba babulale intsapho yakwaSmith. Ngaphantsi kwemiyalelo evela kumalume wakhe, u-Earnest Burkhart wabonisa indlu kaSmith kubo babini ababetha.
Emva kokubulawa kukaSmith, uHale wayesaba ukuba uKirby wayeya kuthetha ngokuxhamla kukaHale kwiqhinga lokubulala. Uqinisekisile uKirby ukuba aphange ivenkile apho wayenokuthi wayefumana iigugu ezixabisekileyo. Umnikazi wevenkile watshelwa ngehora elichanekileyo ukuphanga kwakuza kwenzeka. Xa uKirby waqhankqalaza kwisitoreji, wahlwaywa ngeemfucu ezininzi ezenzeka ekufeni kwakhe.
U-Ernest Burkhart ubonakalise ukuba unxibelelwano olubuthathaka kwi-Hale kwaye wayekuqala ukuvuma. UJohn Ramsey naye wavuma emva kokufunda ukuba ubungqina obuninzi bthotyelwe njani malunga neenjongo zokubulala uHale.
Kwakhona kwafumanisa ukuba uMollie Burkhart wayefa ngenxa yento ekholelwa ukuba yityhefu. Emva kokuba ususwe ekulawuleni iBurkhart neHale, wabuyiselwa ngokukhawuleza. Xa ukufa kukaMollie, u-Ernest wayeya kuzuza yonke inzala yeLizzie Q.
Ngethuba likaHale ilingo lamangqina amaninzi okhuselo ayenzela inkohlakalo kwaye ininzi yabangqina bentshutshiso babethushelwa kwaye besongelwa ukuba bathule. Emva kweemvavanyo ezine, uWilliam K. Hale noJohn Ramsey bathotywa kwaye bagwetywa ejele entolongweni.
U-Ernest Burkhart wamkela ubomi entolongweni ngenxa yenxalenye yakhe ekubulaweni kwentsapho yakwaSmith.
UKelsey Morrison wagwetywa ejele entolongweni ngenxa yokubulawa kuka-Anna Brown. UBryan Burkhart waphendulela ubungqina bombuso kwaye akazange aphinde agwetywa.
NgoJuni, ngo-1906, uRhulumente waseburhulumenteni wamisela umthetho apho amalungu angama-2,229 wesizwe sase-Osage ayefumana inani elinganayo lezabelo ezibizwa ngokuba ngamalungelo entloko.
Ukugcinwa kwamaNdiya ase-Osage kwakhiwa iigrafa ezizigidi neziqingatha zamazwe aseAsia. Umntu wase-Osage ozalwe emva kokugqithiswa komthetho wayeza kuba nefa lakhe kuphela elilinganayo lamalungelo akhe. I-oyile yafunyanwa kamva kwi-Osage ukugcinwa kunye nobusuku besizwe sakwa-Osage saba ngabantu abacebile kunabo bonke emhlabeni.
Okunye: Iifayile zeefayili (onke ama-3,274 kumaphepha) zifumaneka ngaphandle kwentlawulo kwi-website ye-Freedom of Information yase-Osage kwi-web page.
AbaLawuli beMaqhawe abaLawuli beNtloko
U-Chai Vang wabulala abazingeli aba-6 kwi-Wisconsin
'80s Rock Music Izinhlobo - A Capsule View
INzululwazi ithi Ufanele uhambe kwixesha lemiyalezo
UWilliam Walker: Ultimate Yankee Imperialist
I-SAT izikolo zokufakwa kwiiKholeji eziphezulu zaseTexas
Indlela Yokuphulaphula Intuition Yakho
I-Stink Bugs, i-Family Pentatomidae
Iintlobo zeendlela zokuPhepha kwe-Prezygotic Isolation
Ukuphuhliswa kwamanxweme kwiNguqulelo yeShishino
I-Job Job Fair - ISL Plain Lesson
Ukubuyiselwa kweBhodi yeHlabathi Yamaha EZ-200
Iingcebiso zokugcina iSketchbook okanye i-Visual Journal
I-Aviation Aviation: USS Langley - Umqhubi wokuqala we-Aircraft Carrier
Iprofayile: Al Jazeera
I 'Yellow Pages' I-Scam igcina ekuthatheni